FARIIN JACAYL: Mararka qaar waxaan dayacaa inaan kuu sheego sida aad xageyga muhiim uga tahay. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeARIMAHA BULSHADAFARIIN JACAYL: Mararka qaar waxaan dayacaa inaan kuu sheego sida aad xageyga muhiim uga tahay.
FARIIN JACAYL: Mararka qaar waxaan dayacaa inaan kuu sheego sida aad xageyga muhiim uga tahay.
July 16, 2018 Abdirahman Al-cadaala ARIMAHA BULSHADA, WARARKA MAANTA Comments Off on FARIIN JACAYL: Mararka qaar waxaan dayacaa inaan kuu sheego sida aad xageyga muhiim uga tahay.
Farxadda qaarkeed waxaa lagu cabiraa aamusnaan, halka dhoolacadeyntuna ay siddo micno ka badan ereyada. Waxaa ley weydiiyey inaan jewi farxad ku jiro markaad nolosheyda ka mid tahay,waxaana ku jawaabaa dhoolacadeyn.
* Haddii la i yiraahdo soo tiri sababaha aan adiga kugu jeclahay, waxa ay igu qaadaneysaa inta nolosha ka dhiman inaan soo xisaabiyo, waayo jaceylkaaga wuxuu iiga dhigan yahay duni aniga iyo adiga inoo qaas ah.
*Nolosha wax macno ah kuma fadhido hadii aanan kaa helin jaceyl daacad ah oo farxad ku dhisan, waana waxa keliya ee aan kaaga baahanahay inaad wahsi la’aan iigu deeqdo.
*Marka waxwalbo u muuqdaan in ay lumeen iyo cidladu deris kula noqoto, ma garan kartid wax aad sameyso, fiiri gudaha qalbigeyga waxaad ka dhex arkeysaa inuu kaaga banaan yahay boos qaas kuu ah adiga.
*Marwalba oo aan ku arkaba aniga xageyga waxwalbo wa ay ka istaagaan, waxaana ku indho doogtaa quruxdaada, naftu kama dheragto in ay kugu ildoogsato qaabdhiskeeda hagaagsan ee uu alle kuu sameeyey.
*Mararka qaar waxaan dayacaa inaan kuu sheego sida aad xageyga muhiim uga tahay, sida joogidaada ay iigu sameyso farqi weyn, dadka noocaaga ah waa ay ku yar yihiin dunida, waxaana rajeynaa inaad garwaaqsatay macnaha aad iigu fadhido.
*Waxaad ku soo gashay nafteyda si kedis ah, waxaadna isiisay labo arimood oo kala ah; Dulqaad qalbiga ka soo go’ay iyo nolosha oo ii iftiintay.
*Yeysan ereyadaan keliya taabanin indhahaaga, haku dhex safraan naftaada, hana ku dhex nastaano qalbigaaga sida aad keyga u dhex degtay. Ogow wadnuhu wuxuu qabaa dhaawacyo caashaq, cidladuna waxey igu sii kordhisaa baahida caashaq, hadalkaaguna waxaan uga helaa sida neecowda macaan nooluhu ugu baahan yahay.
Fariimo Kooban Oo Jaceyl Ah
942,029 total views, 2,154 views today
942,029 total views, 2,154 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
941,900 total views, 2,154 views today
941,900 total views, 2,154 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
941,933 total views, 2,155 views today
941,933 total views, 2,155 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
942,001 total views, 2,154 views today
942,001 total views, 2,154 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
942,040 total views, 2,154 views today
942,040 total views, 2,154 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]